Elman oo galabta guul kaga gaartay Kooxda Heegan horyaalka Somali Premier League – Gool FM
(Soomaaliya) 19 Feb 2019. Kooxda Elman ayaa galabta guul ka gaartay naadiga Heegan kadib markii ay ugu adkaatay 3-1, ciyaar qeyb ka aheyd horyaalka Somali Premier League.
Kulankan ayaa ahaa mid aad u xiiso badan qeybtii hore waxaa lagu kala maray 2- gool iyo 0 ay ku horkaceyso kooxda Elman, waxaana goolasha u dhaliyay ciyaaryahanka Anwar Shankunda, sidaas ayaa lagu kala nastay.
Markii dib la isku soo laabtay qeybtii dambi ee ciyaarta kooxda Heegan ayaa la timid gool waxaana u dhaliyay Ugama oo u dhashay dalka Uganada, kulanka ayuu ka dhigay 2-1 ay ku hogaamineyso kooxda Elman.
Balse dhamaadii ciyaarta waxaa niyada ka dilay taageerayasha kooxda Heegan ciyaaryahan Anwar Shankunda kaas oo dhaliyay goolkii Saddexad ee ciyaarta.
Ugu dambeyn kulanka ayaa ku soo dhamaaday 3-1 ay guusha ku raacday wiilasha Elman.
Si kastaba Kooxda Elman ayaa galabta gaartay guushii ugu horeysay ee horyaalka hada waxey leedhahay afar dhibcood halka Heegan ay leedhahay 3-dhibcood.
W/D Cabdifitaax Cabdirashiid Abuukar (Naani)